17 yakanakisa yakabhadharwa mari yeinjiniya kudzidza 2021/2022 Portal Dzidzo: Yazvino Chikoro Nhau
17 akanakisa akazara-anotsigirwa neinjiniya masomo: Dzidzo uye ruzivo rwavanoti isimba. Chinhu chakanaka chatichange tichikurukura zvese muchinyorwa chino.
Muchikamu chino, pane chidimbu cheruzivo rwakakosha nezve mamwe akazara-anobhadharwa mari yeinjiniya masomo. Nekudaro, kana iwe wanga uchitsvaga mabhezari akagadzirirwa vadzidzi veinjiniya, ndapota verenga.
17 Yakanakisa Zvizere Inobhadharwa Injiniya Scholarship
Pazasi pane mamwe akanakira zvizere-anotsigirwa engineering engineering:
1. Oxford-Weidenfeld uye Hoffmann Scholarship uye Hutungamiri Chirongwa
Iyi nyanzvi inotsigira vadzidzi vakakurumbira. Zvakare, zvinobatsira avo vanobva mukuchinja uye hupfumi huri kusimukira muAfrica yose. Pamusoro pezvo, muAsia yose neSouth America. Uku kutsvaga dhigirii kuOxford University. Zvakare, inotarisirwa neiyo Weidenfeld-Hoffmann Trust.
Yunivhesiti yeOxford, United Kingdom.
Nhamba / Munda (s) weChidzidzo
Inotarisa pane einjiniya makosi pane Zvekurima, hutano, zvakatipoteredza, uye manejimendi manejimendi. Zvakare, pane zvehupfumi, yeruzhinji neyekunze mutemo.
Inotarisa vadzidzi kubva mukuchinja uye kusimukira kwehupfumi muAfrica yose. Zvakare, kuburikidza neAsia neSouth America.
The kudzidza inovhara 100% yemayunivhesiti. Zvakare, inovhara Koreji fizi uye rubatsiro rwemari yekugara. Iyi ingangoita £ 14,777. Zvakare, mibairo inoitwa kwenguva izere yemubhadharo wako wemari yechikoro chakabvumiranwa. Iyi ndeimwe yeanomwe gumi nemaviri akabhadharwa zvizere engineering engineering
Iwe unofanirwa kunge uchigara mune imwe yenyika dzakakodzera.
Zvakare, iwe unofanirwa kuve uchifunga kudzokera kunyika yako yaunogara kugara. Iyi inguva kosi yako yapera.
Ndokumbira utarise izvi. Vakabudirira kunyorera vanofanirwa kuratidza kufarira kushandira nharaunda yepasirese. Uye izvi zviri kuburikidza nemunda wavo wakasarudzika webasa. Zvakare, ivo vanofanirwa kuratidza kuratidzira kubatana pakati pechidzidzo chavo uye nezvinangwa zvavo zvenguva refu-zvebasa.
Nekudaro, vachitsanangura maonero avanoona basa ravo rehunyanzvi richipa mukuvandudza kweveruzhinji hupenyu. Zvakare, izvi zviri munyika yavo yekwatangira. Kana padanho rakakura renharaunda kana repasi rese.
Unogona kushanyira iyo yepamutemo Scholarship Webhusaiti pano
2. Heinrich Böll Stiftung: Iyo Green Political Foundation
ichi kudzidza ndeye vadzidzi uye vadzidzi vezvechiremba vanobva kunze kweGerman. Yekupedzisira nguva yekushandisa ndeye 1 Kurume. Ndokumbira utarise: Chete epamhepo kunyorera zvinogamuchirwa.
Zvakare, iyo portal yekushandisa ichavhurwa anenge mavhiki e6 pasati pasvika nguva yekunyorera. Uye, iyi ndeimwe yeinjiniya gumi nembiri-inobhadharwa zvizere dzidzo.
Nekudaro, vekunze Vanyoreri vanofanirwa kuratidza kugona kwavo muchiGerman. Zvakare, ruzivo rwakanaka kana rwakanaka kwazvo rwechiGerman runodiwa. Uye zvirinani B2 Chikamu kana DSH2.
maawa emahofisi: Mo, Tu, Thu, Fr 10-13 Uhr
Ndokumbira utarise: Chete epamhepo kunyorera zvinogamuchirwa.
1. Unganidza ruzivo nezve maitiro ekunyorera uye magwaro akakumbirwa.
2. Zvakare, nyoresa iyo online application portal.
3. Uyezve, ipa ruzivo rwakakumbirwa muInternet Application Portal.
4. Uyezve, mushure mekuburitsa zvese zvinyorwa zvako, tumira kunyorera. Izvi zvinofanirwa kunge zvisati zvaitika kupera kwegwaro rekushandisa.
3. Edinburgh Global Ongororo Scholarship
Yunivhesiti yeElinburgh inopa 30 masomo. Zvakare, izvi ndezve PhD Research Program mune chero ndima yekudzidza. Nekudaro, ivo vanofanirwa kupihwa neYunivhesiti yeiyo 2020-2021 yekudzidzira chikamu.
Yunivhesiti yeElinburgh, UK.
Nhamba / Munda weChidzidzo
Ph.D. Chirongwa mune chero chikamu chekudzidza chinopihwa kuYunivhesiti.
Vadzidzi vekune dzimwe nyika.
chimwe nechimwe kudzidza inovhara musiyano uripo pakati pemari yechikoro ye UK/EU graduate mudzidzi. Zvakare, uye izvo zvinokwenenzverwa kune mhiri kwemakungwa akapedza kudzidza mudzidzi. Nekudaro, iyo mibairo haifukidze mari yekuchengetedza.
Zvakare, zvinoenderana nekufambira mberi kunogutsa, iyo mibairo inotarisirwa kusvika kumakore matatu.
Iwo mibairo yakavhurika kune vekunze kwenyika vanotanga Ph.D. mune chero munda wekudzidza mu2020-2021. Zvisinei:
Vanyoreri vanofanirwa kuve nemhosva yekubhadhara mari yechikoro. Izvi ndizvo pamwero unoshanda kune vadzidzi vekunze kwenyika. Uye inofanirwa kuve yakashandiswa kubvumidzwa kune yakazara-nguva Ph.D. chirongwa chekutsvaga chekudzidza.
Zvakare, vanyoreri vanofanirwa kuve vane hunhu hwepamusoro hwepamusoro uye kugona kwekutsvaga. Nekudaro, vavhoti vane yepamusoro kirasi yechipiri vanokudza Bachelor's degree (kana yakaenzana mhiri kwemakungwa) inogona kutariswa. Nekudaro, kuti uve nemakwikwi, iwe unofanirwa kuve uine yekutanga-kirasi Bachelor's degree. Uye izvi zvinofanirwa kuwedzerwa neakanakisa Master's degree.
Uyezve, zvimwe zvinhu zvakaita semamiriro emari, nyika, uye ndima yakatarwa yekudzidza haina kutarisirwa.
Vanokodzera vanyoreri vanofanirwa kuzadzisa online kudzidza kudzidza kunyorera ne 23:59 GMT 17 Kukadzi 2021.
Zvakare, zvakakosha kushanyira iyo yepamutemo webhusaiti. Uku ndiko kuwana fomu rekunyorera. Zvakare, uye neruzivo rwakadzama nezve maitiro ekunyorera izvi kudzidza. Pamusoro pezvo, kuwana iyo online fomu rekunyorera.
17 Feb 2021 (pagore). Zvakare, iyo kosi inotanga Sept 2021.
Yepamutemo Scholarship Website: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/research
4. UEA Kubudirira Kwepasi Pose Scholarships kune International Students
Ichi ndicho chimwe chei 17 yakanakisa yakazara-yakabhadharwa mari yeinjiniya masomo. Zvakare, iyi ndeimwe yakazara mubhadharo kudzidza kune vadzidzi vepasirese kuenda kuMasters Degree makosi anopiwa neChikoro cheInternational Development.
Chikoro cheInternational Development, iyo University yeEast Anglia kuUK.
Iwo masomo anopiwa pahwaro hwehunyanzvi hwekudzidza. Semuenzaniso: Yekutanga kirasi degree. Uye chirevo chavo pachavo. Zvakare, vanyoreri vanotarisirwa kunge vasangana nechikoro Chirungu mitauro inodikanwa. Uye kupihwa uye kupihwa nzvimbo pane kosi nenguva yekupedzisira.
Vese vanokodzera kukwikwidza kune avo vakaita Chikoro chakapihwa vanozotariswa kusarudzwa. Nguva yekupedzisira yezvikumbiro ndeye 28 February 2021.
Yepamutemo Scholarship Website: https://www.uea.ac.uk/study-with-us-restructured/postgraduate/scholarships/social-sciences/international-development/full-fees-scholarship/
28 Feb 2021 (pagore). Zvakare, iyo kosi inotanga Nyamavhuvhu 2021.
5. Yunivhesiti yeSussex Chancellor Yenyika Dzese Scholarship
Aya mabhezari anowanikwa mune mazhinji eSussex Zvikoro. Zvakare, uye vanopihwa pahwaro hwekuita kwedzidzo. Uye izvo zvinogona kune vasiri-EU vadzidzi vepasirese avo vakanyorera uye vakapihwa nzvimbo yekukodzera yakazara-yakazara Postgraduate Kudzidziswa madhigirii kuYunivhesiti yeSussex.
Yunivhesiti yeSussex, United Kingdom.
Aya mabhezari anofukidza yakazara-nguva Master's zvirongwa zvinopihwa kuYunivhesiti yeSussex Zvikoro.
Vasiri-UK / EU Vadzidzi vepasirese.
Idzidzo ndeye 50% kubva kune yepasi rese mudzidzi fizi yechikoro. Zvakare, masomo anopiwa kune rimwe gore redzidzo.
Kuti zvikwanise kuwana ruzivo urwu:
1. Unofanirwa kuverengerwa semhiri kwemakungwa nekuda kwemubhadharo.
2. Zvakare, inofanira kunge yakagamuchira nzvimbo pane yakazara-nguva yakakodzera Masters. Kutanga kuYunivhesiti yeSussex munaGunyana 2020.
3. Pamusoro pezvo, inofanira kunge iine mamakisi akanakisa. Kana, UK yekutanga kirasi kana yakaenzana.
4. Uyezve, inofanirwa kuve nezvinangwa zvakajeka uye zvakanangana. Nematanho akatsanangurwa ekosi yako.
Kuti uonekwe seChancellor's International Scholarship, ndapota ona izvi. Unofanirwa kunge wakagamuchira uye ugamuchire kupihwa kwenzvimbo kune vanokodzera Masters kuSussex. Zvakare, kunyorera, iwe unofanirwa kuzadza online fomu rekunyorera. Nguva yakatarwa ndeye 1 Chivabvu 2020 23:59 GMT.
Yepamutemo Scholarship Website: Click Here
1 Chivabvu 2021 (pagore). Zvakare, iyo Kosi inotanga Nyamavhuvhu 2021.
6. Amsterdam Kunakisa Scholarship (AES)
Aya mabhezari ndeevadzidzi vane hunyanzvi hwakasiyana. Zvakare, ndezvevaya vanobva kunze kweEurope. Chinangwa ndechekutevera anokodzera Master's Zvirongwa zvinopihwa kuYunivhesiti yeAmsterdam.
Yunivhesiti yeAmsterdam muNetherlands.
Mvumo yeChirungu-Yakadzidziswa Masters Purogiramu yakapiwa muzvikwata zvinotevera:
Kukura Kwevana uye Dzidzo.
Uyezve, Economics uye Bhizinesi.
Pamusoro pezvo, Mutemo.
Zvakare, Zvemagariro Sayenzi.
Asiri-EU / EEA Vadzidzi Vepasi Pose.
Iyo AES ndeye yakazara kudzidza ye € 25,000. Zvakare, inovhara chidzidzo uye mari yekugara. Uye izvi ndezve gore rimwe redzidzo. Nekwaniso yekuwedzeredzwa kwegore rechipiri kwemaviri-makore Master zvirongwa.
Vasiri-EU vadzidzi kubva kune chero kurairirwa avo vakapedza chikamu chepamusoro 10% yekirasi yavo vanogona kunyorera Zvakare, kusarudzwa kuri pahwaro hwekugona kwedzidzo. Kushuvira uye kukosha kwechirongwa chakasarudzwa chaTenzi kune ramangwana remudzidzi.
Zvikumbiro zvinoitwa kuburikidza neAdmissions Mahofisi eChikoro cheChikoro. Zvakare, iwe unogona kuwana yakatarwa mvumo yekukodzera, sarudzo yekusarudza, uye mirairo yekushandisa pane iwo Akapedza Chikoro Webhusaiti.
Pamusoro pezvo, nguva dzakatarwa dzeAES dzakasiyana. Inosiyana paChikoro chekupedza kudzidza. Asi zviri 15 Ndira 2021 kana 1 Kukadzi 2021.
Yepamutemo Scholarship Website: http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships–tuition/scholarships-and-loans/amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html
15 Jan / 1 Feb 2021 (pagore). Zvakare, iyo kosi inotanga Nyamavhuvhu 2021.
7. University of Twente Scholarship (UTS)
Zvakare, iyi ndeimwe yeiyo 17 yakanyanya-inobhadharwa-mari yeinjiniya masomo. Aya mabhezari ndeevadzidzi vakanaka kubva kune ese EU / EEA uye asiri eEU / EEA nyika. Zvakare. ndezvevaya vanonyorera chirongwa chekupedza kudzidza (MSc) kuYunivhesiti yeTente.
Pamusoro pezvo, ma masomo maviri anogona kupihwa kune vanogamuchira UTS. Uye ivo vari Kipaji Scholarship. Zvakare, uye Purofesa de Zima Scholarship. Uye, aya masomo ane zvimwe zvinodiwa.
Yunivhesiti ye Twente, The Netherlands
Vadzidzi vepasirese kubva kuese EU / EEA. Uye asiri-EU / EEA nyika
Iko kukosha kweiyo masomo kubva ku € 3,000 - € 25,000. Izvi ndezve gore rimwe chete. Nekudaro, kana iri chirongwa chemakore maviri ekudzidza, vadzidzi vanogona kuwana imwe yeUTS yemari yakaenzana neiyo mugore rekutanga pavanosangana nezvinodiwa muIT.
Kuti ukwanise kuwana UTS, cherekedza:
Kunyorera kweiyo UT kudzidza ndeye maitiro. Zvakare, zvakaparadzaniswa nechikumbiro chekupinda kosi kuYunivhesiti yeTwente. Uyezve, zvisinei nemari, iwe unofanirwa kutanga watora tsamba yekugamuchira.
Zvakare, iwe unofanirwa kunge wave (kwenguva pfupi) uchibvumidzwa kune imwe yeanokodzera UT Master zvirongwa zvinotanga mugore redzidzo 2020/2021 (Gunyana). Ndokumbira utarise: Mushure mekupedza kunyorera, zvinogona kutora kusvika kumavhiki masere usati wagamuchira zvabuda.
Zvakare, iwe unofanirwa kuve uine nhamba yemudzidzi.
Uyezve, haufanire kunge wakapedza chirongwa cheU UT chekupedza kudzidza.
Zvakare, iwe unofanirwa kuteedzera nemamiriro ekuwana vhiza yekupinda muNetherlands. Nekudaro, izvo zviri kana zvichibvira.
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kutevedzera iyo yakajairwa mutauro wechiChirungu bvunzo inodikanwa Yedzidzo IELTS 6.5. Kana TOEFL iBT ye90. Uye yekuwedzera 6.0 (TOEFL iBT 20) pane iyo subscore yehunyanzvi hwekutaura
Zvakare, iwe hauna kukodzera kuwana chiDutch kudzidza chikwereti.
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kuve unogonesa mudzidzi. Kazhinji izvi zvinoreva kuti iwe uri weakanakisa mashanu kusvika gumi muzana ekirasi yako.
Zvese zvikumbiro zvakavhurwa 1 Kukadzi 2021 yeRound 2. Zvakare, kuitira kunyorera ichi kudzidza, iwe unotova unofanirwa kuve (kwenguva pfupi) kubvumidzwa kune imwe yeanokodzera Master zvirongwa. Uyezve, kunyorera kunoitwa online.
Nguva yekupedzisira yeRound 1 kunyorera ndi1 Kukadzi 2021. Ipo nguva yekupedzisira yeRound 2 kunyorera iri 1 Chivabvu 2021.
Yepamutemo Scholarship Website: https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/
1 Feb / 1 Chivabvu 2021 (pagore). Zvakare, iyo kosi inotanga Sept 2021.
8. Holland Scholarship yeChina-EEA International Students
Zvakare, iyi ndeimwe yeiyo 17 yakanyanya-inobhadharwa-mari yeinjiniya masomo. Iyi fundo inobhadharwa neDutch Ministry yeDzidzo, Tsika, uye Sayenzi. Zvakare, inoitirwa vadzidzi vepasirese kubva kunze kweEuropean Economic Area (EEA).
Izvo ndezvevaya vanoda kuita yavo bachelor kana tenzi pane imwe yeDutch research mayunivhesiti uye mayunivhesiti eakaiswa sainzi muHolland.
Iyi dzidziso inovhara Bachelor's kana Master's Chirongwa munzvimbo dzakakodzera dzekufunda dzinopihwa nemasangano anotora chikamu.
Vadzidzi vepasirose kubva kunze kweEEA.
Idzidzo inosvika ku € 5,000. Zvakare, ndapota cherekedza kuti ichi hachisi chakazara-chidzidzo chedzidzo. Nekudaro, iyo rubatsiro inopihwa kwegore rimwe chete. Uye zvinogona chete kugamuchirwa kamwe chete.
Kuti uve unokodzera, ndapota cherekedza izvi:
Nyika yako inofanira kunge isiri-EEA.
• Zvakare, iwe unofanirwa kuve uchinyorera-izere-nguva bhachura kana tenzi. Uye iyi iri kune imwe yematanho anotora chikamu edzidzo yepamusoro eDutch.
Uyezve, unofanirwa kusangana nezvinodiwa zvechisarudzo chesarudzo yako. Zvakare, iwe unogona kuwana izvi pawebhusaiti yenzvimbo.
Pamusoro pezvo, haufanire kunge wakadzidza kunzvimbo yekudzidzisa muNetherlands.
Iwe unofanirwa kunyorera iyo Holland Scholarship zvakananga kunzvimbo inotora chikamu yesarudzo yako. Zvakare, nguva yekupedzisira yezvikumbiro ndeye 1 Kukadzi 2020 kana 1 May 2020.
Yepamutemo Scholarship Website: http://www.studyinholland.nl/scholarships/holland-scholarship
1 Feb / 1 Chivabvu 2021 (pagore). Zvakare, iyo kosi inotanga mu2021.
9. Heinrich Boll Scholarship kuGerman yeVadzidzi Venyika
Zvakare, iyi ndeimwe yeiyo 17 yakanyanya-inobhadharwa-mari yeinjiniya masomo. Aya mabhezari ndee vadzidzi vepasirese. Ivo vakawana yavo yekuyunivhesiti yekupinda chiyero kubva kuchikoro chiri kunze kweGerman. Uye ndiani anoda kudzidza Tenzi kana Ph.D. Degree kuGerman.
Nyika kana nyika-inozivikanwa Yunivhesiti kuGerman.
Iwo masomo ari kuenda kuMasters's Degree. Kana Ph.D. Degree muzvidzidzo zvese zvinopihwa kumayunivhesiti ehurumende kana ehurumende anozivikanwa kuGerman. Zvakare, ndezvevadzidzi veEU. Zvakare nedzidzo dzeMasters's Degree kumayunivhesiti ehurumende kana ehurumende anozivikanwa kuGerman. Uye, muSwitzerland, nedzimwe nhengo dzeEU dzinogoneka.
Boka rinotarisirwa vadzidzi vepasirese. Ose EU uye asiri EU, vasina kudzidza kuGerman.
Vasiri-EU vadzidzi: € 850 pamwedzi. Uye pamwe nemari dzakasiyana siyana. Zvakare, fizi yechikoro mune zvimwe zviitiko zvinogoneka kuGerman.
Vadzidzi veEU: Mari inosiyana. Nekudaro, inoenda kunokwana € 649. Uyezve, pamwe € 300 bhuku remari pamwedzi. Zvisinei, mari yechikoro haigoneke kuGerman. Asi zvinogoneka padanho rakatemerwa mune dzimwe nyika.
Uyezve, iyo fundo inopihwa yenguva yenguva yekudzidza. Nekudaro, pamwe yakawedzerwa nesemester imwe.
Vasiri-EU vadzidzi: € 1,200 pamwedzi. Uyezve € 100 yekufambisa mvumo pamwedzi. Zvakare, pamwe nemari dzakasiyana siyana. Zvisinei, mari yechikoro haigoneke.
Vadzidzi veEU: € 1350 pamwedzi. Uyezve € 100 pamwedzi yekutsvagisa inodhura mvumo. Zvakare, pamwe nemari yechikoro haigoneke kuGerman. Asi zvinogoneka padanho rakatemerwa mune dzimwe nyika.
Pamusoro pezvo, iyo dzidziso inopihwa kwemakore maviri semutemo. Nekudaro, pamwe yakawedzeredzwa kaviri zvakanyanya nehafu yegore.
International Master vadzidzi vakawana yavo yekuyunivhesiti yekupinda chinzvimbo kunze kweGerman:
• Unogona kunyorera usati watanga chirongwa chako cheMasters. Kana panguva ipi neipi kusvika kumagumo semester yekutanga yechirongwa cheMasters.
Zvakare, humbowo hwekutanga hunyanzvi hwehunyanzvi hunofanirwa kupihwa.
Vadzidzi veMunyika Dzechiremba avo vakawana iyo yunivhesiti yekupinda yekufanirwa kunze kweGerman:
Iye anenge achinyorera anofanira kunge akagamuchirwa semudzidzi wechiremba nenyika kana yunivhesiti inozivikanwa nehurumende kuGerman. Zvakare, humbowo hwekubvumirwa, sekutonga kuGerman, inofanirwa kuverengerwa pamwe nechikumbiro.
Uyezve, nezuva rekushandisa, basa rekutanga rinofanira kunge rakapedzwa. Uye nguva inoshanda yekupedzisa inofanira kuendeswa.
Zvakare, zvidzidzo zvePhD zvine chekuita nenzvimbo dzakatarisana nezviitiko zveSiseko zvichapihwa pekutanga.
Kuti uwane ruzivo rwezvinodiwa zvekushandisa uye maitiro, ndapota tarisa ruzivo ruzivo A 1-1 or A 2-1. Iyo online application portal inovhara 1 Kurume at the latest.
Yepamutemo Scholarship Website: https://www.boell.de/en/foundation/application
1 Kurume (pagore). Zvakare, iyo inotevera kosi inotanga mu2021.
10. DAAD Scholarship kuGermany yeChipangamazano-Yakanangana neDhivhosi Courses
Aya mabhezari ndee vadzidzi vekunze. Uye avo vanobva kusimudzira uye nyika dzichangobva kusimukira. Zvakare, vakagura pamatanho ese. Uye neanenge makore maviri 'ruzivo rwehunyanzvi.
Zvakare, ivo vanopa iwo mukana wekutora postgraduate kana Master's degree. Izvi zviri kuhurumende kana nyika-inozivikanwa yunivhesiti yeGerman. Uye muzviitiko zvakasarudzika kutora degree rezvechiremba. Zvakare, kuwana yunivhesiti kufunda (Master 's / PhD) kuGerman.
Zvikoro zveGerman zvinopa budiriro-zvine chekuita nedzidzo yepamusoro
Ivo vanovhara Masters kana Ph.D. makosi eEconomics Sayenzi / Bhizinesi Rekutonga / Zvematongerwo enyika Zvehupfumi. Zvakare, Kubatana Kwekubudirira. Uye Injiniya uye Inoenderana Sayenzi.
Pamusoro pezvo, Mathematics, Dunhu uye Kuronga Kwemaguta. Uye Zvekurima uye Masango Sayenzi. Uyezve, Natural uye Environmental Sayenzi. Pamusoro pezvo, Mushonga uye Ruzhinji Hutano. Masayendisiti Sayenzi, Dzidzo uye Mutemo uye Media Zvidzidzo.
Vechidiki nyanzvi kubva munyika dzichiri kusimukira.
Iwo mabhezari anosanganisira kubhadhara pamwedzi kwe850 euros. Uye izvi ndezve vadzidzi. Kana 1,200 euros yevanachiremba vanonyoresa. Zvakare, kubhadhara kune hutano, tsaona, uye wega mutoro inishuwarenzi inovharwa. Uye mari yekufambisa. Kunze kwekunge mari idzi dzichifukidzwa nenyika yekumusha kana imwe sosi yemari.
Iyo yekufunda nguva ndeye 12 kusvika kumwedzi 24. Nekudaro, izvi zvinoenderana nesangano chairo reMasters nemwedzi makumi matatu nematanhatu yeP.D.
Kuti uve unokodzera, ndapota cherekedza:
Iyo inoshanda kana kune yeruzhinji masimba. Kana kambani yenyika kana yakazvimiririra mune iri kusimukira nyika. Uye, nekudaro, iri kuita kuronga uye kuita mirairo. Zvakare, uye mapurojekiti aine kusimbisa pamitemo yekusimudzira ine chekuita netekinoroji, hupfumi, kana nzanga nzvimbo.
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kubata Bachelor's degree mune inoenderana chidzidzo.
Zvakare, ndinofanirwa kunge ndapedza degree redzidzo. Izvi zvine mhedzisiro yepamusoro-avhareji. Uye zvine makore angangoita maviri emakore ehukama hwehukama hune hukama mushure mekutanga degree.
Zvakare, ako madhigirii edzidzo haafanire kuve anopfuura makore matanhatu ekuberekwa.
Zvekudzidza makosi muchiGerman: Scholarship inosanganisira kosi yemwedzi mitanhatu yemutauro wechiGerman. Uye kubudirira kupasa kwemitauro bvunzo DSH 6 kana TestDaF 2 isati yatanga kosi yekudzidza. Nekudaro, padiki diki mutauro wechiGerman nhanho yeB4 panguva yekunyorera chinhu chinodiwa. Zvakare, inoda kuratidzwa nekupa chitupa.
Kune makosi muChirungu: IELTS (Bhendi 6) chitupa kana TOEFL (mashoma mamaki: 550 mapepa-akavakirwa, 213 komputa-yakavakirwa, 80 internet-yakavakirwa)
Zvikumbiro zvinofanirwa kuitwa zvakanangana nekosi yacho. Zvakare, ndapota tarisa kune akakodzera kosi mawebhusaiti enzira yekushandisa.
Yepamutemo Scholarship Website: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=F&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50076777
Aug-Gumiguru 2020 (pagore). Zvakare, kosi inotevera inotanga AY 2021/2022.
11. Orange Knowledge Program muNetherlands
Zvakare, iyi ndeimwe yeiyo 17 yakanyanya-inobhadharwa-mari yeinjiniya masomo. Inovavarira kufambisa mberi kukura kwesimba. Zvakare, iyo ruzivo uye mhando yeavo vaviri vanhu. Zvakare nemasangano ari maviri mumunda wepamusoro uye wehunyanzvi dzidzo. Uye mune mimwe minda inoenderana nemusoro wekutanga mumatunhu epurogiramu.
Dutch maYunivhesiti ayo anopa OKP anokwanisa zvirongwa / makosi.
Nhamba / Munda (s) wekudzidza
Scholarships inowanikwa kusarudzwa kwemakosi mapfupi. Uye tenzi zvirongwa.
Iyo OKP kudzidza inoitirwa kuwedzera muhoro iwe waunofanirwa kuramba uchigashira panguva yekufunda nguva. Zvakare, iwo mupiro kumatenga ako ehupenyu. Uye zvinodhura zvakadai semari yechikoro uye vhiza. Zvakare, kufamba, inishuwarenzi, nezvimwe.
Zvakare, iwe unofanirwa kufukidza chero mutsauko pakati peiyo OKP kudzidza huwandu uye izvo chaizvo zvinodhura iwe pachako.
Iwe uchawana nzira yekukodzera pane izvi batanidzo.
Iwe unofanirwa kunyorera zvakananga neDutch yepamusoro dzidzo institution yesarudzo yako. Zvakare, bata iyo yekuDutch yepamusoro dzidzo institution. Iyo inopa iyo OKP inokodzera kosi yesarudzo yako kune maitiro ekunyorera.
Zvakare, iyo yechiDutch institution inogona kukupa iwe rumwe ruzivo. Izvi zviri pamatanho akasiyana akabatanidzwa mukushandisa. Uye sarudzo maitiro, pamwe nezvinotarisirwa kukodzera.
Iwo matatu mukwikwidzi kunyorera kutenderera kwemunhu kudzidza ndeye 3 Kukadzi-5 Kurume: Yese pfupi kosi uye tenzi zvirongwa. Zvakare, 24 Chivabvu-13 Chikumi: Makosi ese mapfupi uye tenzi chirongwa chine nemwedzi gumi nemaviri 30 Gunyana-12 Gumiguru: Pfupi kosi chete.
Zvakakosha kuverenga iyo OKP ruzivo rwevanonyorera.
Yepamutemo Scholarship Website: https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/orange-knowledge-programme
24 Mar / 30 Chikumi / 13 Gumiguru Zvakare, kosi inotanga 2021/2022.
12. Westminster International Postgraduate Yakazara Scholarship
Zvakare, iyi ndeimwe yeiyo 17 yakanyanya-inobhadharwa-mari yeinjiniya masomo. Pamusoro pezvo, aya mabhezari anoitirwa vadzidzi vanobva munyika dzichiri kusimukira. Ivo vanoshuvira kudzidza yakazara-nguva Masters's degree kuYunivhesiti.
Yunivhesiti yeWestminster, United Kingdom.
Chero Chero Nguva Yakazara Master's Chirongwa inopihwa kuYunivhesiti yeWestminster kunze kweMBA.
Iyo inovhara yakazara tuition muripo waivers. Zvakare, nekugara. Uye mari yekugara uye nendege kuenda nekubva kuLondon.
Iwe unofanirwa kuve mudzidzi wepasi rese kubva kunyika iri kusimukira.
Zvakare, iwe unofanirwa kubata kupihwa kune yakazara-nguva Masters's degree paYunivhesiti yeWestminster.
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kubata Yekutanga Kirasi Honors degree.
Zvakare, inofanirwa kunge iri mune zvemari uye yekusimudzira kugona.
Shanyira iyo yepamutemo Scholarship Webhusaiti kune ruzivo rwekushandisa: https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-international-postgraduate-full-scholarship
29 May 2020 (pagore). Zvakare, iyo inotevera kosi inotanga Sept 2020.
13. Japanese Hurumende Scholarships kune International Undergraduate Vadzidzi
Zvakare, iyi ndeimwe yeiyo 17 yakanyanya-inobhadharwa-mari yeinjiniya masomo. Ministry of Dzidzo, Tsika, Mitambo, sainzi, uye Tekinoroji (MEXT) inopa kudzidza kune vadzidzi vepasirese. Avo vanoshuvira kudzidza kumayunivhesiti eJapan sevadzidzi vepasati vapedza kudzidza pasi peHurumende yeJapan (MEXT) Scholarship Chirongwa che2020.
Nyika dzenyika dzine hukama hwehukama nehurumende yeJapan.
Scholarship Makomborero / Nguva:
Iwo kudzidza kwacho kunosanganisira chidzidzo uye zvimwe fizi. Zvakare, inovhara mugove we117,000 yen pamwedzi. Pamusoro pezvo, stipend yemwedzi nemwedzi ye2,000 kana 3,000 yen inogona kupihwa kune avo vanoita kudzidza kana kutsvagisa mumatunhu akasarudzika. Zvakare, zvekufambisa mutengo kuenda nekubva kuJapan.
Iyo nguva yekufunda ichagara kwemakore mashanu. Izvi zvinobva muna Kubvumbi 2020 kusvika Kurume 2025. Zvakare, kusanganisira yegore-rimwe redzidzo yekugadzirira mumutauro wechiJapan. Uye zvimwe zvidzidzo zvinofanirwa kupihwa kana wasvika muJapan.
Wana ruzivo pano: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/scholarships_2019_e.pdf
SINGA mubairo unopihwa vadzidzi vepasirese. Zvakare, ndezvevaya vane yakanakisa zvedzidzo undergraduate uye / kana tenzi mhedzisiro. Pamusoro pezvo, ndezvevaya vane chido chakasimba. Izvi zviri mukuita tsvagiridzo inotungamira kune doctorate (Ph.D.) muSainzi neUinjiniya kuSingapore University.
Ph.D. Zvirongwa muByomedical Sayenzi uye Sayenzi Sayenzi uye Injiniya.
Vanenge 240 pagore.
Mubairo unopa rutsigiro rwemari kusvika kumana emakore eP.D. zvidzidzo. Zvakare, kusanganisira yakazara mari yechikoro. Uye stipend yemwedzi nemwedzi, yekubhadhara mubhadharo, uye mari yekubhadhara ndege.
Iyo yakavhurika kune vese vadzidzi vepasirese.
Zvakare, iwe unofanirwa kuve uine kudzidza nechido chekutsvaga. Uye inofanirwa kuve nemhedzisiro yepamusoro yezvidzidzo
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi hwakanaka mune yakanyorwa uye inotaurwa Chirungu.
Zvakare, iwe unofanirwa kuve nemushumo wakanaka kubva kune vevadzidzi vevadzidzi.
Zvikumbiro zvinoitwa online.
Wana ruzivo pano: https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA
1 Chikumi 2020 (pagore). Zvakare, iyo inotevera kosi inotanga Jan 2021.
15. Taiwan Yepamusoro Dzidzo yepamusoro Scholarship Chirongwa
Iyi fundo inovavarira kubatsira nyika dzekudyidzana dzichiri kusimukira. Iko kuzadzisa kusimudzira kusimukira kuburikidza nedzidzo. Zvakare, iyo inopa kudzidza kune yepamusoro dzidzo. Uye yakagadzira undergraduate, graduate, uye Ph.D. zvirongwa. Izvi zviri kubatana nemayunivhesiti ane mukurumbira emaTaiwan.
Inobata undergraduate, Graduate, uye Ph.D. zvirongwa. Zvakare, inovhara izvo zvine hukama neSainzi neTekinoroji. Pamusoro pezvo, Injiniya, Ruzhinji Hutano, uye Mushonga. Uye Sustainable Agriculture Development. Uyezve neHumanities neSocial Sayenzi. Zvakare, Yakavanzika Chikamu Chikamu.
Shanyira iyo Webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
15 Kurume 2020 (pagore). Zvakare, iyo kosi inotanga Nyamavhuvhu 2020.
16. Commerce Kubudirira Scholarship paYunivhesiti yeMelbourne.
Chirongwa ichi chakanangana nekupa mubairo vadzidzi vepamusoro-soro vanotanga iyo Bachelor yeCommerce, iyo Commerce / Juris Chiremba Vanopedza Degree Package kana iyo Commerce / Injiniya Dhigirii Dhijitari.
Yunivhesiti kana Sangano: Yunivhesiti yeMelbourne
mubayiro: Kusvika $ 26,500
Kupinda Mode: Online
Nhamba Yemakambani: 40
Mubairo unogona kuendeswa mukati Ositireriya
Kuti uwane uyu mubairo, vanyoreri vanofanirwa kutora kubvumidzwa kuMelbourne. Zvakare, mushure maro, vadzidzi vanozo tarisirwa otomatiki iwo iwo mukana. Uyezve, sarudzo inoitwa zvichibva pakukodzera kwedzidzo.
Inokodzera kunyorera yeakapedza kosi degree degree mudzidzi mumwe nemumwe anofanira kutarisa kupinda zvinodiwa. Zvakare, yekutora kubvumidzwa, vanenge vachikwikwidza vanowanzo fanirwa kusangana nemhando chaiyo yeChirungu kuyunivhesiti
Chipo ichi chiri kupa zvipo zvekugara zvemadhora zviuru zvisere. Uye izvi zviri pagore pamusoro pemakore matatu. Zvakare, inobhadharwa mumadhora maviri zviuru zvina zvemadhora muna Kubvumbi naGunyana uye mari yekufambisa yakakosha pamadhora mazana maviri nemazana mashanu.
Kuti uwane rumwe ruzivo uye Nyorera Izvozvi
17. UQ Newcrest-yakabhadharwa mari neInternational Ph.D. Scholarship muHydrometallurgy, 2021
Iyi purogiramu inowanikwa kuita Ph.D. degree kuYunivhesiti yeQueensland. Zvakare, chirongwa chemari chinopa $ 28,092. Uye izvi zviri pagore kune vese vekumba uye epasirese vadzidzi vegore redzidzo 2020-2021.
Yakagadzwa mu1909, iyo University yeQueensland ndeimwe yemayunivhesiti anotungamira eAustralia. Zvakare, iyo inopa vanobatana, bachelor, tenzi, doctorate, uye epamusoro doctorate madhigirii. Uye inoverengerwa seyunivhesiti inoremekedzwa kwazvo ye48th munyika.
Yunivhesiti kana Sangano: Yunivhesiti yeQueensland
mubayiro: $ 28,092 pagore
Nhamba Yemakambani: Hazvizivikanwi
Nationality: Dzimba & Dzemunyika
Zvinokodzera Nyika: Zvikumbiro zvinogamuchirwa kubva pasirese pasirese.
Kosi inogamuchirika kana Zvidzidzo: Iwo maScholarships anopihwa munzvimbo yechidzidzo cheEngineering neComputing.
Maitiro AnotenderwaKuti vave vanokodzera, vanyoreri vanofanirwa kusangana nezvinotevera zvinotevera:
Zvakare, bachelor's degree ine anove anokudza kirasi IIA kana yakaenzana kubva kumayunivhesiti anotenderwa, ayo anosanganisira akakodzera ekutsvagisa chinhu; kana
Dhigirii redhisheni tenzi; kana
Zvakare, degreework tenzi degree uye yakazara GPA (giredhi poindi yepakati) yakaenzana ne5.65 pane iyo 7-poindi UQ chikero, iyo inosanganisira inoenderana yekutsvagisa chikamu; kana
Dhigirii repashure pegore rimwe chete yakazara-nguva yakaenzana neGPA yakazara (giredhi poindi yepakati) yakaenzana ne5.0 pachiyero che7-poindi yeUQ, pamwe chete nerakaratidza ruzivo rwekutsvagisa rwakaenzana nekukudza IIA inozotarisirwa kuF.D. kupinda pane imwe nyaya nenyaya; kana
Dhigirii reBachelor pamwe makore maviri kana maviri akanyorwa akakodzera ruzivo rwekutsvagisa, kusanganisira zvinyorwa zvekutsvaga.
Maitiro Okushandisa: Kuti vafungidzirwe nezvechikumbiro ichi, vanyoreri vanofanirwa kutora kubvumirwa muPh. neChirongwa chekutsvagisa kuyunivhesiti. Mushure meizvozvo, vese vavhoterwa vanofanirwa kutumira email magwaro anotevera kuna Associate Professor James Vaughan ([email inodzivirirwa]).
Kutsigira Zvinyorwa: Vanyoreri vanofanirwa kuendesa tsamba yekuvhavha, CV, uye zvinyorwa zvedzidzo nemaapplication avo.
Zvido zvekugamuchira: Nekuda kunyorera iwo iwo mukana, vanyoreri vanofanirwa kusangana nezvinodiwa zvekupinda zvedzidzo zvepamusoro degree nekutsvaga.
Chirevo cheMutauro: Vanyoreri vanobva kunze kwenyika yekumba vanowanzo fanirwa kusangana nemitauro yechirungu inodikanwa kuti vakwanise kudzidza kuyunivhesiti.
Iwo kudzidza kwacho kunopa $ 28,092 pagore risingabhadhari mutero, yakanongedzwa gore rega rega pachikamu chedzidzo 2020-2021.
Izvi zviri pamusoro ndedzimwe dze17 dzakanakisa-dzakabhadharwa zvizere mainjiniya dzidzo. Tevedza zvinongedzo zvakapihwa pamusoro uye shandisa. Rombo rakanaka.
Kuongororwa kweiyo Chikamu Chekuteedzera KuEnzvimbo Yekutungamira Zvirongwa Nekuzadza Zviteshi MuKaduna Metropolis, Nigeria
UNILAG Forensic Investigation & Criminal Intelligence Courses Yekugamuchira Fomu 2018/2019 uye Maitiro Ekunyorera
Dzinotsvedza Matekiniki muVarimi-Vafudzi Vanopesana Nhaurwa muZvasarudzwa Mapepanhau eNigerian
Nyorera Izvozvi ZveMunhu Munyori Jobho kuGreatview Nigeria Limited - 2016
Tarisa NCAT Yakapfupikiswa Musarudzo 2021/2022 PDF Chinyorwa Kurodha pasi
Tarisa INEC Yakapfupikiswa Musarudzo 2020/2021 PDF Chinyorwa Kurodha pasi
Mashandiro anoita Mari Yevadzidzi muEuropean Nyika
« Kudzidza muGerman Zvizere Zvakabhadharwa Scholarship 2021 Kunyorera Fomu Portal
7 Zvakanakisa Ndiri Kuda Kudzidza Kunze Kwenyika Mahara Scholarship 2021/2022 Portal »